NAD + Na Nka: Ọrụ nke (NR) Nicotinamide Riboside Chloride Fact In Anti-ịka nká
NAD + Precursors na Aging: Ọrụ nke (NR) Nicotinamide Riboside Chloride Eziokwu na Mgbochi ịka nká
Nicotinamide riboside (NR) na nicotinamide riboside (Chloride)
Nicotinamide riboside (NR) chloride bụ ụdị chlorinated nke nicotinamide riboside (NR).
1.Gịnị bụ Nicotinamide Riboside (NR)?
NR bụ ụdị vitamin B3 ma ọ bụ niacin. A chọtara ogige ahụ na 1940s dị ka ihe na-eto eto maka H. influenza. Na mmalite nke 21st ọtụtụ narị afọ, ọtụtụ ọmụmụ ga-egosi na NR bụ ihe atụ nke NAD +. N’ime ahụ mmadụ, nri a na-ebelata kọlestrọl, na-ebelata ohere mmadụ nwere ịrịa ọrịa obi, na-eme ka ụbụrụ rụọ ọrụ, na-ebelata ogbu na nkwonkwo.
Nicotinamide riboside (NR) bụ pyridine-nucleoside, na-eje ozi dị ka onye bu ụzọ nye NAD + (Nicotinamide adenine dinucleotide). NAD + na-eme ka ọtụtụ ihe ndị dị ndụ na-arụ ọrụ gụnyere mmezi DNA, ọgbọ nke ike mkpụrụ ndụ, ịtọ ntọala ikuku circadian, na ndị ọzọ. N'ụzọ dị mwute, ụmụ irighiri ihe ndị a na-ejikarị ụbụrụ anụ arụ.
2.Gịnị bụ Nicotinamide Riboside (NR) Chloride?
Nicotinamide Riboside (NR) chloride (NIAGEN) bụ ihe nrụpụta nke NR na chlorine. Lọ ọrụ ahụ na-amụba ọkwa nke NAD + ma rụọ ọrụ SIRT1 na SIRT3. Ọ na - agbanwe nká site na ime ka metabolism na - egbochi mmegide metabolic na - emetụta nri.
Na US, nicotinamide riboside chloride na-adịkarị ghọtara dị ka mma. Yabụ, ọ bụ ngwa nri akwadoro maka iji mee ka mmiri mebie protein, mmiri vitamin, chịngọm, yana yiri ya Mmeju.
Humanmụ mmadụ na-egbochi ịka nká site na ịchekwa anụ ahụ. N'otu oge, ọ ga-abụrịrị na ị hụla ụfọdụ Mgbochi nká creams maka ihicha miri ihu wrinkles, sagging akpụkpọ, na blotchiness. Otú ọ dị, ọgwụgwọ ndị a adịchaghị mma ma dị mkpụmkpụ. Zọ a ga-esi mee agadi nke ịka nká n'ụzọ dị mma bụ site na ịmepe ngbanwe nke ndụ na-akpata ịka nká na ijikwa isi ihe kpatara ya.
Ndị nchọpụta emeela ka njikọ dị n'etiti obere NAD + na ọrịa metụtara afọ. Nchọpụta a bụ isi na achịcha achicha site n'ịbawanye ihe gbasara nke puru ịtụgharị usoro ịka nká. N'ihi nke a, nicotinamide riboside chloride ntụ ntụ agabigawo na corridors nke ụlọ nyocha nyocha ọfụma n'ihi nrụpụta ọrụ ya n'ịkpu elekere nyocha.
Nkọwapụta Chemical nke Nicotinamide Riboside (Chloride) Powder
Ọnọdụ nchekwa -20 Celsius C Freezer
Knowingmara uru nke Nicotinamide riboside (NR), kedụ uru Elebara Nicotinamide Riboside Chloride?
Uru nke nicotinamide riboside chloride na nicotinamide riboside yiri ebe ha abụọ na-arụ ọrụ iji rụọ ọrụ NAD na sirtuin 1 protein.
Ahụike Metabolism dị mma maka ijikwa oke ibu
Ọtụtụ nnyocha egosiwo na uru nke nicotinamide riboside chloride dị na mbenata ibu. Ndị ọrụ nwere ike idafu 10% nke abụba ahụ na-enweghị mmechi agụụ ma ọ bụ ọzụzụ anụ ahụ.
Akingụ ọgwụ na-enyere aka belata LDL cholesterol ma na-ebuli ogo nke cholesterol dị mma. Nke a na - eme mgbe ọ na - egbochi ọrụ nke enzymes maka njikọ nke triglycerides. N'ihi ya, imepụta lipoproteins dị ala na-ebelata.
Nicotinamide riboside chloride na-erite ndị ọrịa buru oke ibu na-arịa ọrịa shuga. Ihe mgbakwunye ahụ na-eme ka metabolism dịkwuo mma site na imeziwanye nnabata nke glucose
Mgbe ọkwa NAD dara n'okpuru kachasị mma, usoro nyocha gị na ahụike gị nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ. Were, dịka ọmụmaatụ, ndị ọrịa nwere ọrịa Alzheimer na-egosipụta ntakịrị nkwụsị nke NAD + na nkwụsịtụ mitochondria.
N'etiti ọgwụ nicotinamide riboside chloride na-eji, njikwa nke neurodegeneration na ịka nká n'elu ndepụta ahụ. Ọgwụ ahụ na-eme megide mmebi intracerebral, ọrịa strok, ọrịa nchịkwa, na ọnwụ na-adịghị mma.
Anti-ịka nká Mgbakwunye
Otu n'ime isi Nicotinamide riboside chloride na-eji gụnyere ịkwalite ike nká. Ngwakọta ahụ na-eduga na mmụba nke mmepụta NAD, nke na-arụ ọrụ dị mkpa na cell. Dịka ọmụmaatụ, ọ na - eme ka ogo ike cellular dị na akwara, imeju, na akụrụ. E wezụga nke ahụ, Nicotinamide riboside chloride na-egbochi ịka nka site n'ịbawanye mgbasa ọbara na akụkụ ndị a dị mkpa.
Nicotinamide riboside chloride na-erite uru mkpụrụ ndụ ihe nketa site na idozi DNA ochie na nke mebiri emebi. Ọ bụrụ na ịta ahụhụ nke NAD dara, deoxyribonucleic acid ahụ merụrụ ahụ nwere ike ịkpalite ụdị ikuku oxygen, na-eduga na nrụgide oxidative, na-enwe ike ịrịa kansa.
Kedụ ka Nicotinamide Riboside Chloride siri gbakebe?
N'oge ịka nká, ahụ na-ahụ ụfọdụ mgbanwe mgbanwe ahụ ka ọrụ cellular na-alaghachi azụ. Dịka ọmụmaatụ, ahụ na-edozi protein NAD + na SIRT1 karịa ka ọ nwere ike ịmepụta. Obere ogo nke coenzymes ndị a na-eme ka ịka nká na-eme ngwa ngwa ma na-ebute ọrịa ndị metụtara afọ dịka ọrịa shuga, ọrịa obi, na oke ibu.
Nchịkwa nicotinamide riboside chloride bara uru dịghịzi usoro site n’ime ka akwara ọbara dị, dị ka lymphocytes na leucocytes. Ngwakọta ahụ na-edozi njikọ nke NAD +, yabụ, na-agbago ogo nke protein SIRT1. N'ihi ya, SIRT1 na-ebelata ịka nká site na ịbawanye ọbara na akwara skeletal, sistemụ obi, na anụ ahụ na-ahụ maka akwara.
E wezụga nke ahụ, nicotinamide riboside chloride supplementation na-agbanwe ịka nká site n'inwekwu NAD + iji nyere aka na ndozi DNA n'ime usoro cellular. Mmetụta a na-egbochi nrụgide oxidative
Nnyocha ahụ dịnụ na-egosipụtakwa na nicotinamide riboside chloride counters bone density njupụta, mbelata nke mmepụta akwa, na ego hypopigmentation. Ọnọdụ ndị a niile juru ebe niile n'etiti ndị agadi.
NAD⁺ Precursors: Nicotinamide Riboside Chloride na Nicotinamide Mononucleotide
Enwere ihe karịrị ise NAD + ma mana ugbu a, anyị nwere ike ịgbanwe uche anyị na nicotinamide riboside chloride vs. nicotinamide mononucleotide (NMN).
Ogige abụọ a na-amụba ọkwa NAD + n'ime ahụ iji melite ọrụ cellular ma belata nwayọ.
Ihe na-agwa abụọ ndị a iche bụ na NMN abụghị ụdị vitamin B3. Chemical ahụ anaghị abanye na cell ruo mgbe ọ gbanwere nicotinamide riboside. Ihe kpatara ya bụ na nha ihu igwe ya buru ibu karịa nke nicotinamide riboside chloride powder. N'ihi ngwongwo a, bioavailability nke NMN na atụmanya nke ime ka ọkwa NAD + bụrụ ọkpụkpụ nke esemokwu na mpaghara nyocha.
Dị ka Dr. Sinclair si kwuo, mkpụrụ ndụ ihe nketa na Mahadum Harvard, arụmọrụ nke NMN enweghị atụ. O kwuputara iji ihe a mgbakwunye, nke na-eme ya ka ọ dị obere ma mee ka ọ dị ọhụrụ. Sinclair na nha anya nke NMN ka ọ na-agba ọsọ na igwe igwe. Ọkà mmụta sayensị kwuru na ọ na-eme ka mgbasa ọbara dịkwuo mma, na-akwalite ntachi obi uru, na ịrụ ọrụ nke ọma.
N'aka nke ozo, Nicotinamide riboside chloride bu nke cell na-aru. Molekul bụ vitamin B3 ọzọ. Ọ ga - eme ka ọkwa NAD + dị elu karịa 60% na ahụ mmadụ. N'adịghị ka ọtụtụ NAD nke bu ụzọ, nke dị na ndepụta ndepụta nke FDA, nicotinamide riboside (NR) chloride dị na whitelist nke ngwaahịa nri GRAS (A Na-amatakarị Nchekwa).
Gini na eweghi NAD uzuzu ozugbo? Nicotinamide Riboside Chloride na Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)
Ebe ọ bụ na anyị na-elekwasị anya banyere ibuli NAD elu na ahụ, ị ​​nwere ike ị na-ajụ ihe kpatara nsogbu ahụ na nicotinamide riboside chloride. Ikwesighi inye nad ozugbo na sistemụ gị karịa ịgabiga nsogbu nke iji ndị na-eme ihe dị ka NIAGEN, NR, ma ọ bụ NMN? Ọfọn, kwe ka m kọọrọ gị gbasara nicotinamide riboside chloride vs nicotinamide adenine dinucleotide.
Isi ihe mere na ị gaghị ewere NAD ozugbo bụ na onye na-ahụ maka ihe ndị dị ndụ enweghị ike ịbanye na sel.
Ihe gbakwunyere site na iji nicotinamide riboside chloride na nicotinamide adenine dinucleotide bụ na ihe mbụ dị na membrane plasmic. Mmetụta absorption ya dị elu nke ukwuu site na usoro digestive, n'ime ọbara, na n'ikpeazụ n'ime ụbụrụ.
Nicotinamide riboside (NR) Chloride Dosage: Otu esi eji?
Na 2016, nicotinamide riboside chloride supplement meriri ọnọdụ GRAS. Otu afọ tupu mgbe ahụ, FDA kwadoro ya dị ka isi iyi nke niacin na ihe oriri na-eri nri kwa ụbọchị nke 180mg.
Ka ọ dị ugbu a, ikikere kachasị nke nicotinamide riboside chloride usoro onunu ogwu na 300mg kwa ụbọchị. Otú ọ dị, na ụfọdụ ọnwụnwa mmadụ, isiokwu ndị ahụ ga-etinye aka na 2000mg nke ọgwụ ahụ. I kwesiri iburu n'uche na oke nke 500mg nwere ike ibute enweghi nsogbu nke nicotinamide riboside.
Thedị niacin na-emetụta naanị ike ndị okenye, gụnyere ụmụ nwanyị na-atụ anya na ndị nne na-enye ara.
Nicotinamide Riboside Chloride Mmetụta: Ọ Dị Mma iji Nicotinamide Riboside Chloride Supplement?
Nicotinamide riboside chloride ntụ ntụ dị mma ma ọ na-ejide ọnọdụ nwere nnukwu agụụ nke ihe GRAS. Eziokwu a apụtaghị na ogige ahụ enweghị mgbaàmà ọ bụla. A sị ka e kwuwe, mmiri bụ ndụ ma ọ na-adọta ụfọdụ nsogbu na-adịghị mma mgbe ị metọrọ ya. Iji gbochie mmetụta ndị dị na ya, gbaa mbọ hụ na ọgwụ Nicotinamide riboside chloride gị dị ala dị ka o kwere mee.
Fọdụ n'ime mmeghachi omume na-adịghị mma gụnyere;
Mmeghachi omume anụ ahụ dị ka ọkụ ọkụ na ọnya na-arị elu
E wezụga nicotinamide riboside chloride mmetụta ndị dị n'elu, ị nwekwara ike ịnweta arọ ọnwụ. Agbanyeghị, nsonaazụ a bụ ngọzi na-agbanwe agbanwe karịchaa ma ọ bụrụ na i buru oke ibu, ma ọ bụ na ị na-achọ idobe ibu gị.
Ebe ịzụta (NR) Nicotinamide Riboside Chloride na Bulk?
Nwere ike ịme nicotinamide riboside chloride zụta na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ma ị chọrọ ka ọgwụ na-emepụta ntụ ntụ na nnukwu ma ọ bụ ụfọdụ mgbakwunye nri, hụ na ị ga-achọ ezigbo ndị na-ebu ngwaahịa. Ihe gbakwunyere nke ịzụ ahịa ahịa bụ na ị nwere ike ịtụle ọnụahịa na lelee ezigbo nzaghachi ndị ahịa. Agbanyeghị, ị nwekwara ike ịda maka adịgboroja.
Anyị bụ ndị a tụkwasịrị obi na ngwaahịa anyị niile na-agbaso ụkpụrụ njikwa mma. Anyị na-emeso kemịkal dị iche iche na dietary Mmeju. Kpọtụrụ anyị maka iwu gị na nkwupụta okwu enyi.
Conze, D., Brenner, C., & Kruger, CL (2019). Nchebe na Metabolism nke Nchịkọta Ogologo nke NIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) na Randomized, Double-Blind, Nnwale Nlekọta Nlekọta Ahụike nke Ahụ Ike Ndị okenye. Akụkọ sayensị.
Bogan, KL & Brenner, C. (2008). Nicotinic Acid, Nicotinamide, na Nicotinamide Riboside: Nyocha Molecular nke NAD + na-ebute vitamin ndị na-edozi ahụ. Nyochaa Kwa Afọ Banyere Nri.
Mehmel, M., Jovanovic, N., & Spitz, U. (2020). Nicotinamide Riboside - Ọnọdụ Nyocha na Usoro Ọgwụ Ugbu a.
Turck, D., Castenimiller, J., et al. Ndị ọzọ (2019). Nchebe nke Nicotinamide Riboside Chloride dị ka akwụkwọ nri Novel na-akwado iwu (EU) 2015/2283 na Bioavailability nke Nicotinamide sitere na Isi mmalite a, na Ọnọdụ nke Ntụziaka 2002/46 / EC. EFSA Journal.
Elhassan, YS et al. (2019). Nicotinamide Riboside na-eme ka ọkpụkpụ Skeletal Muscle nke agadi NAD + Metabolome na Induces Transcriptomic na Anti-Inflammatory Signatures. Akụkọ banyere Cell.
Aman, Y., Qiu, Y., Tao, J., & Fang, EF (2018). Ike Ọgwụ nke Boosting NAD + na Ọrịa na Ọrịa Na-emetụta Afọ. Nkà Mmụta Ntugharị nke Agka nká.
RAW NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE (NMN) IWU (1094-61-7)
RAW LORCASERIN HCL AKA (846589-98-8)
1.Nicotinamide riboside (NR) na nicotinamide riboside (Chloride)
3.Mara Uru nke Nicotinamide riboside (NR), kedụ uru Elebara Nicotinamide Riboside Chloride?
4.Kedu ka Nicotinamide Riboside Chloride siri gbakebe?
5.NAD⁺ Precursors: Nicotinamide Riboside Chloride na Nicotinamide Mononucleotide
6.Gịnị mere na agaghị ewere ntụ ntụ NAD ozugbo? Nicotinamide Riboside Chloride na Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD)
7.Nicotinamide riboside (NR) Chloride Dosage: Otu esi eji?
8.Nicotinamide Riboside Chloride Side Effects: Ọ Dị Mma iji Nicotinamide Riboside Chloride Supplement?
9.Ebe tozụta (NR) Nicotinamide Riboside Chloride na Bulk?